माओवादीका सबैभन्दा भाग्यमानी महरा « Bikas Times
सभामुखमा निर्विरोध, महरा १० वर्षमा ५ पटक मन्त्री,
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । २०१५ सालमा रोल्पामा जन्मिएका महरा स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका नेता हुन् ।
२०३५–०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न भई राजनीतिमा सक्रिय भएका महरा ०३६ सालदेखि ०३९ सम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रोल्पाको सचिव र केन्द्रीय प्रतिनिधि भएका थिए ।
०३७ मा तत्कालीन नेकपा चौमको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका महराले सोही सालमै पार्टीको रोल्पा जिल्ला सदस्य भएका थिए । २०३९ देखि ४१ सालसम्म अ.ने.रा.स्व.वि.यू. आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय उपाध्यक्ष, पृथ्वी नारायण क्याम्पस पोखरा, स्व.वि.यु. कोषाध्यक्षसमेत भएका महरा २०४१ देखि ०४५ सालसम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पा जिल्ला शाखाको मन्त्री भएका थिए । ०३६ देखि ०४८ सम्म विज्ञान र गणित शिक्षकको रुपमा १० वर्ष शिक्षण पेशा अंगालेका महरा २०४८ सालदेखि नेकपा (मशाल) रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी (डिसिएस) बनेका थिए । ०४८ को निर्वाचनमा रोल्पा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित महरा २०५० मा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए ।
२०५१ सालमा नेकपा माओवादी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय व्युरो सदस्यमा चयन भएका महरा २०५३ मा केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए । २०५५ सालमा पोलिट्ब्युरो सदस्य बनेका महरा २०५८ सालमा तत्कालीन सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोली संयोजकसमेत भएका थिए । २०६० सालमा सरकारसँगको दोस्रो वार्ता टोलीको सदस्य बनेका महरा २०६१ सालमा नेकपा माओवादीको प्रवक्ता समेत बनेका थिए ।
२०६२ सालमा माओवादीको स्थायी समिति सदस्य बनेका महराकै नेतृत्वमा २०६३ मा तत्कालीन सरकारसँग वार्ताको लागि गठित समितिको संयोजक पनि बनेका थिए ।
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । त्यसबेला महराकै नेतृत्वमा माओवादी संसद्मा प्रवेश गरेको थियो ।
२०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्तासमेत भएका थिए ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा दाङबाट निर्वाचित महरा २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
२०६५ सालमा माओवादी स्थायी समिति सदस्य भएका महरा २०६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोको ईन्चार्ज भएका थिए । २०६७ सालमा माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका महरा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट निर्वाचित महरा २०७१ मा माओवादीको महासचिव बनेका थिए । २०७३ सालमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बनेका महरा २०७४ मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । २०७३ देखि उनी माओवादी कार्यालय सदस्य रहेका छन् भने हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी दाङबाट निर्वाचित भएका थिए ।